Guggulsterone ntụ ntụ (95975-55-6) hplc ma98% | AASraw R & D Reagents
/ ngwaahịa / R & D mmeghachi omume / Guggulsterone ntụ ntụ
SKU: 95975-55-6. Category: R & D mmeghachi omume
Guggulsterone ntụ ntụ bụ phytosteroid dị na resin nke osisi guggul, Commiphora mukul. Guggulsterone ntụ ntụ nwere ike ịdị dịka onye nke abụọ stereoisomers, E-Guggulsterone ntụ ntụ na Z-Guggulsterone ntụ ntụ. N'ime ụmụ mmadụ, ọ na - eme dịka onye na - emegide onye natara X, bụ nke a kwenyere na ọ ga - eme ka ọnụ ọgụgụ cholesterol belata na imeju. E bipụtara ọtụtụ ọmụmụ nke na-egosi enweghị ọnụ ọgụgụ zuru oke nke cholesterol zuru ezu na-eji ụdị dosages nke Guggulsterone ntụ ntụ, na ọkwa nke lipoprotein dị ala ("ajọ cholesterol") mụbara n'ọtụtụ mmadụ. Ka o sina dị, Guggulsterone ntụ ntụ bụ ihe na-emepụta ọtụtụ ihe oriri.
Oleogum resin (nke a maara dị ka guggul) si osisi guggul, Commiphora mukul, nke dị na India, Bangladesh, na Pakistan, ejiriwo agwọ ọrịa dị iche iche gụnyere hyper-cholesterolemia, atherosclerosis, rheumatism, na oke ibu ọtụtụ puku afọ. A chọpụtawo na ntụ ntụ Guggulsterone dịpụrụ adịpụ site na guggul dị ka ihe na-emepụta ihe na-emepụta ọgwụ na-akpata ọgwụgwọ nke guggul. Ebe ọ bụ na nchọpụta mbụ nke na-egosi mmerụ ahụ nke ọgwụ na-egbuke egbuke n'ụdị anụmanụ n'ime 1966, a na-eme ọtụtụ ụzọ mgbatị na usoro nlekọta ahụike. Ọ bụ ezie na ọdịiche dị iche iche na nchọpụta ọmụmụ, àgwà nke usoro, nchọpụta ọnụ ọgụgụ, ntinye ntanetị, na isiokwu ndị mmadụ na-eme ka ụfọdụ ndị na-ekwekọghị na nzaghachi ahụ, nchịkọta data sitere na vitamin, viticular, na ọmụmụ ihe dị iche iche na-akwado nchịkọta ọgwụgwọ maka ọgwụ ndị a kọwara na ihe odide Ayurvedic oge ochie. Otú ọ dị, ọmụmụ ihe ọmụmụ n'ọdịnihu dị ukwuu ma buru ibu ka achọrọ iji gosi nkwupụta ndị a. A na-enweta uru nke obi na-agwọ ọrịa site na ọtụtụ ihe ndị na-emepụta ọgwụ ndị metụtara guggul ma ọ bụ Guggulsterone ntụ ntụ, ma ọ bụ hypolipidemic, antioxidant, na ihe mgbochi. E guzobewo na Guggulsterone ntụ ntụ bụ onye na-akwado ihe nkwụnye nke x (FXR), onye na-achịkwa ihe odide ederede maka nlekọta nke cholesterol na bile acid homeostasis. Antagonism nke FXR site na Guggulsterone ntụ ntụ bụ ihe a chọrọ ka ọ bụrụ usoro maka mmetụta hypolipidemic ya. Nnyocha a na-adịbeghị anya na-egosi na ntụ ọka Guggulsterone na-eme ka mgbapụta mbupụ ntụgharị bile beta (BSEP), onye na-ebufe mmiri na-ebute ya na cholesterol metabolites, bile acids si na imeju. Mgbanwe dị otú ahụ nke BSEP site na Guggulsterone ntụ ntụ na-enye cholesterol metabolism n'ime mmiri bile acids, ma si otú ahụ na-anọchi anya usoro ọzọ maka usoro hypolipidem. A chọpụtala na Guggulsterone ntụpụ na-egbochi mmechi nke nuklia na-akpata-kappaB (NF-kappaB), nkatọ dị oké njọ nke nzaghachi mkpesa. A na-atụgharị ụdị ịdaba nke NF-kappaB site na Guggulsterone ntụ ntụ dị ka usoro nke mmetụta mgbochiflammatory nke Guggulsterone ntụ ntụ.
Ụzọ ikpeazụ ndị powders Guggulsterone nwere ike isi rite uru n'ịlụ ọgụ maka abụba bụ na nri ndị na-emepụta ketogenic na iji hormone eme ihe. Ka oge na-aga, nri nri ketogenic na-eme ka ị belata ịdị irè thyroid site n'ime ka nsụgharị nke T4 gaa na T3 ka njọ. Ozokwa, ebe a na-eburu ebe ndị Guggulsterone kwa ụbọchị maka ọnwa 3, ha mepụtara mmụba na-arịwanye elu na ọnya na ọtụtụ ndị ọrịa. Site na tetracycline, mmịpụta pasent nke ọnya ndị na-egbu ọkụ bụ 65.2% ma e jiri ya tụnyere 68% na powders Guggulsterone. Dịka ị pụrụ ịhụ, enyi anyị Guggul nwere ike ịlụ ọgụ.
Ònye pụrụ irite uru na nke a? Hmmm !!! Ọfọn, dị ka m nwere ike ịkọ, ihe fọrọ nke nta ka ọ bụrụ onye ọ bụla. Enweghị otu onye m maara na ọ gaghị achọ ka mma. Nke a bụ eziokwu karịsịa maka ndị na-arịa ọrịa anabolic / androgenic dị ka ndị a na-eme ka mmanụ na akpụkpọ ahụ nwee ike ịnweta. Ka m chee na - ọ dịghị onye na-achị ọchị na Mr. Huggulee Guggulee! N'ezie, o nwere ike inwe aha mara mma ma n'ime akwụkwọ m ọ bụ dike. Kedu ebe ọzọ ị ga-esi nweta onyinye nke ga - enyere gị aka ịbafu abụba, meziwanye profaịlụ gị cholesterol, ma n'otu oge ahụ meziwanye ogo gị? Enwere m anya ogologo na ike, ma enwebeghị m ike ịchọta onye ọ bụla.
Kemgbe ọtụtụ puku afọ, a na-eji resin guggul mee ihe na nkà mmụta ọdịnala na-agwọ ọrịa rheumatism, ọrịa ogbu na nkwonkwo, ọrịa na-adịghị na-ahụ maka ọrịa, ọrịa ọbara, ọrịa urinary na ọrịa anụahụ. Nkà mmụta nke oge a achọtawo ihe àmà na powders Guggulsterone nwere ike imeju na imeju, na-edozi nsogbu nke lipid metabolism dị ka cholesterol dị elu. Site na usoro a na-amaghi, Popides Guggulsterone na-eme ka nrụrụ ọgwụ na-eme ka ị na-emepụta hormones, na-amụba ume ike na-ahụ n'ahụ.
Agonist na-enweta ihe na-emetụta Estrog (Ki> 5 μM; EC50> 5 μM)
Guggulsterones (guggul) maka ọnwụ ọnwụ na bodybuilding